News - Graphene ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်း
စက်မှုထွင်ခြင်းနည်းလမ်းသည်အရာဝတ္ထုနှင့်ဂရစ်ဖင်းအကြားပွတ်တိုက်မှုနှင့်ဆွေမျိုးရွေ့လျားမှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် graphene ပါးလွှာသောအလွှာပစ္စည်းများရရှိရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးရရှိသော graphene သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံဆောင်ခဲတစ်ခုလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှသိပ္ပံပညာရှင်နှစ် ဦး သည်ဂရစ်ဖင်ကိုရရှိရန်သဘာဝဂရပ်ဖီအလွှာကိုအလွှာအလွှာဖြတ်ရန်ပွင့်လင်းသောတိပ်ဖြင့်သုံးခဲ့သည်။ ၎င်းကိုစက်မှုချွတ်ချွတ်နည်းဟုလည်းသတ်မှတ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုတစ်ချိန်ကထိရောက်မှုမရှိသောကြောင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမပြုနိုင်ဟုယူဆခဲ့သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, စက်မှုလုပ်ငန်း graphene ၏ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများအတွက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတီထွင်မှုတွေအများကြီးဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ လက်ရှိတွင် Xiamen၊ Guangdong နှင့်အခြားပြည်နယ်နှင့်မြို့ကြီးများရှိကုမ္ပဏီအများအပြားသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသော graphene ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်ရန်စက်မှုချွတ်ချွတ်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ တန်ဖိုးနည်းကြီးမားသော graphene ပြင်ဆင်မှု၏ထုတ်လုပ်မှုအခက်အခဲကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။
2. Redox နည်းလမ်း
Oxidation-reduction နည်းသည်သဘာဝ graphite ကိုအောက်ဆီဒိုက်အက်ဆစ်၊ နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်နှင့် potassium permanganate နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်စသည့်ဓာတုဓါတ်ကူပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ graphite အလွှာများအကြားအကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ထို့နောက်ဓာတ်ပြုမှုကိုရေဖြင့်ဆေးကြောပြီးလျှင်၊ ဆေးကြောထားသောအစိုင်အခဲသည်ဖိုက်အောက်ဆိုဒ်အမှုန့်ကိုပြင်ဆင်ရန်အပူချိန်နိမ့်ပြီးခြောက်သွေ့သည်။ Graphene oxide ကို graphite oxide အမှုန့်များကိုအခွံခွာခြင်းနှင့်အပူရှိန်မြင့်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် graphene (RGO) ရရှိရန် graphene oxide ကိုဓာတုနည်းဖြင့်လျှော့ချခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းသည်အထွက်နှုန်းမြင့်မားပြီးလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသော်လည်းအရည်အသွေးနိမ့်သည်။ Oxidation-reduction နည်းသည်ပြင်းထန်သောအက်ဆစ်များဖြစ်သောဆာလ်ဖာအက်ဆစ်နှင့်နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်တို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ရေများစွာလိုအပ်သောကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
redox နည်းလမ်းဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောဂရက်ဖင်းတွင်အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်သောအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အုပ်စုများပါ ၀ င်ပြီးပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော် graphene oxide ကိုလျှော့ချသောအခါ၊ graphene အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်မှုကိုလျှော့ချပြီးနောက်ခက်ခဲသည်။ graphene oxide သည်နေ၏လွှမ်းမိုးမှု၊ ရထားထဲတွင်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်အခြားပြင်ပအချက်များအောက်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်လျှော့ချသောကြောင့် graphene ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး redox နည်းလမ်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်များသောအားဖြင့်အသုတ်လိုက်ခြင်းမှအသုတ်လိုက်ခြင်းသည်အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲစေသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်လူများစွာသည် graphite oxide၊ graphene oxide နှင့် graphene oxide တို့၏အယူအဆများကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဂရစ်ဖိုက်အောက်ဆိုဒ်သည်အညိုရောင်ဖြစ်ပြီးဖိုက်တာနှင့်အောက်ဆိုဒ်ပိုလီမာဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖ်အောက်ဆိုဒ်သည်ဂရစ်ဖိုက်အောက်ဆိုဒ်ကိုအလွှာတစ်ခု၊ နှစ်လွှာသို့မဟုတ်အိုလီဂိုအလွှာသို့သုတ်လိမ်းပြီးရရှိသောအောက်ဆီဂျင်ပါဝင်သောအုပ်စုများစွာပါသောကြောင့် graphene oxide သည်လျှပ်ကူးခြင်းမရှိသောကြောင့်တက်ကြွသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ နှင့်အထူးသဖြင့်အပူချိန်မြင့်မားသောပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်ကာလအတွင်းဆာလ်ဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့သောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်ကို graphene oxide လျှော့ချပြီးနောက် graphene (လျှော့ graphene oxide) ဟုခေါ်နိုင်သည်။
3. (silicon carbide) SiC epitaxial နည်းလမ်း
SiC epitaxial နည်းလမ်းသည်ဆီလီကွန်အက်တမ်များကိုပစ္စည်းများမှဝေးကွာသွားစေရန်နှင့်အလွန်မြင့်မားသောလေဟာနယ်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် စုဝေး၍ ကျန်ရှိသော C အက်တမ်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် SiC အလွှာအပေါ် အခြေခံ၍ graphene ကိုရရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့် graphene ကိုဤနည်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ဤနည်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်သည်။